Puntland ayaa sheegtay in aan lagala tashan shirka uu ku baaqay Farmaajo ee Garowe lagu… – Hagaag.com
Puntland ayaa sheegtay in aan lagala tashan shirka uu ku baaqay Farmaajo ee Garowe lagu…
Maamulka Puntland ayaa ka hadlay shirka uu ku baaqay Madaxweyne Farmaajo ee ah in lagu qabto 15 Febraayo magaalada Garowe shir ay isugu imanayaan madaxda dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir, iyadoo uu maamulku sheegay in aan lagala tashan in Garowe lagu qabto.
Qoraal ka soo baxay xafiiska Madaxweynaha Puntland ayaa lagu sheegay in shirka lagu baaqay uu yahay mid aan lagala tashan ayna ku talineyso in lagu qabto magaalada Muqdisho.
“Dowladda Puntland waxay soo dhaweynaysaa shirka lagu baaqay 15 Febraayo, inkastoo aan lagala tashan in Garowe lagu qabto, maadama uu dhammaaday mudo xileedkii hay’addaha Dastuuriga ah ee DFS, waxayna ku talinaysaa in Shirka lagu qabto Muqdisho, ayna kasoo qayb galaan Saamileyda Siyaasada iyo Beesha Caalamka.”ayaa lagu yiri qoraal kooban oo ka soo baxay Maamulka Puntland.
Maxamed Cabulaahi Farmaajo Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday ayaa shir isugu yeeray xalay Madaxda Dowlad Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir, shirkaasi oo dhameystir u ah fulinta heshiiskii ay ku gaareen magaalada Muqdisho 17kii Septembar ee Sanadkii hore ee 2020-kii.
Shabakada Wararka. hagaag.com info@hagaag.com